पछिल्लो २४ घण्टामा नेपालमा एक हजार ३६ जना कोरोनाका नयाँ सङ्क्रमित थपिएका छन् । पछिल्लो २४ घण्टामा नाै हजार ६२४ आरटीपीसीआर परीक्षण गरिएकोमा एक हजार ३६ जनामा सङ्क्रमणको पुष्टि भएको हो ।
ओखलढुंगाको मोलुङ गाउँपालिकामा रहेका दुई स्वास्थ्य संस्थाका भवन प्रयोगविहीन भएका छन् । नयाँ भवन निर्माण भए पनि आवश्यक पूर्वाधार व्यवस्थापन नहुँदास्वास्थ्य चौकी भवन प्रयोगविहीन बनेका हुन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले १० हिमाली जिल्लामा १८ वर्षमाथिकालाई आजदेखि कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन गरिएको जनाएको छ । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीले ती जिल्लाका १८ वर्षभन्दा माथिका सबैलाई आजदेखि यही असोज १४ गतेसम्म कोरोना भाइरस विरुद्धको पहिलो मात्राको खोप अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो ।
पछिल्लो २४ घण्टामा १० हजार ७८६ आरटीपीसीआर परीक्षण गरिएकोमा ९७५ जनामा सङ्क्रमणको पुष्टि भएको हो । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सोही अवधिमा तीन हजार ३१ वटा एन्टीजेन परीक्षण गर्दा १२० जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको जनाएको छ ।
आजदेखि ११ दिनसम्म देशैभर भेरोसेल खेपको पहिलो डोज लगाउन सुरु गरिएको छ । चीनबाट आईपुगेको ४४ लाख डोज खोप आजबाट नागरिकमा वितरण सुरु गरीने स्वास्थ्य सेवा विभाग बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखा प्रमुख डा. सागर दाहालले बताउनुभयो । दोस्रो मात्रा भने कात्र्तिक ४ द्खि १४ गतेसम्म सबै जिल्लामा दिईने उहाँले बताउनुभयो ।